Home Wararka Madaxweynaha Mexico oo laga helay caabuqa coronavirus
Madaxweynaha Mexico oo laga helay caabuqa coronavirus
Warbaahinta dalka Maksiko ayaa baahiyay in m/weynaha dalkaas Andres Manuel Lopez in laga helay xanuunka safmareenka ah ee Karoona kadib baaritaan lagu sameeyay.
Qoraal uu m/weyne Lopes ku qoray bartiisa twitterka ayuu sidoo kale ku xaqiijiyay in laga helay xanuunka Karoona waxaana uu sheegay inuu iskarantiilay.
Sidoo kale xubno ka mid ah qoyskiisa iyo dadka sida gaarka ah ula shaqeeya ayaa baaris loo diray lana amray inay iskarantiilaan.
M/weynaha Maksiko oo 67 sanno jir ah ayaa aad loo saluugsanyahay sida ay xukumadiisu ula tacaashay ka hor tagista xanuunkaan halista gudaha dalka Maksiko.
Ku dhawaad 150 kun oo ruux ayaa xanuunka Karoona ugu geeriyootay dalka Maksiko